May ny TIA Shop / TIA COM etsy Analakely | GAZETY_ADALADALA
May ny TIA Shop / TIA COM etsy Analakely
Posted on 08/07/2011 by gazetyavylavitra
Efa any an-tafon-trano ny afobe, nefa ny varavarana aty ambany tsy mbola misy novohana
Tsy vitsy amintsika no efa nividy zavatra, na farafaharatsiny nandalo teo amin’ity magazay iray lehibe etsy ampitan’nyInstitut d’Hygiene Social ity. Ny TIA Shop / TIA COM etsy Analakely no tiana hasiana resaka.
Nirehitra teo anelanelan’ny tamin’ny 7 ora sy 7ora sy sasany teo izy io. Betsaka tokoa ny fahavoazana. Latsaka ny ranomason’ireo very fananana, nolelafin’ny afo. Niezaka nanao izay ho afany hifehezana nyafao ihany koa ny mpamonjy voina avy etsy Tsaralalàna, saingy tsy voafehy ny afo raha tsy efa tany amin’ny manodidina ny tamin’ny 9 ora sy 30 mn alina tany ho any.
Zavatra iray isan’ny saiky ratsy tamin’ity indray mitoraka ity ny nisian’ny mpanao gazety iray, manana namana ao amin’io magazay io, ka nanolo-tena nanampy ireo mpamoaka entana mba hanavotra izay azo avotana, tsy nifankahalala tao anaty fisafotofotoana anefa ny rehetra, ka dia noheverin’ny tra-pahavoazana ho toy ny mpangalatra ranamana, ary dia saiky matim-bono raha tsy nisy niaro ara-potoana. Very tao anatin’ity safotofoto ity koa ny findain’io mpanao gazety namana io.
Zavatra faharoa nanamarika ahy teny an-toerana koa ny fisian’ny iray tamin’ireo mpamonjy voina nivazavaza tamin’ny olona teo aminìny manodidina. Kiriana moa ny olona rehefa misy tranga toy ireny ka dia mitangorona sy manelingelina tokoa. Ny mpamonjy voina etsy efa sahirana sy mitolona hanao izay tratra hamonoana ny afo, ny olona koa sarotra tenenina. Dia tena mamo tokoa ilay iraikalahy niteny ny olona, sady mamon’ny asa, no mamon’ny rano (ilay rano mafana io lazaina io an). Nifangaro ireo zavatra roa ireo ka tsy atao mahagaga raha tonga hatramin’ny teny tsy mihaja niloaka ny vavany.
Tsy hain’ny mpanoratra izay antony, fa dia fotoana elabe (tamin’ny 8 ora 30mn) tany ho any vao tapa-kevitra ny hamaky varavarana ny mpamono afo. Talohan’izay dia ny tifi-davitra sy tifi-danitra hatrany no nampiasàna ny rano. Mbetika atondro mankany amin’ny varavaran-kely, mbetika alefa avy any ambony tafo any ny rano, mbetika koa avy eny an-davarangan’ny trano iray teo akaiky teo.
Tamin’ny 9 ora teo ho eo dia notapahana ny herinaratra. Efa nisy rahateo ny tariby tapaka nilatsaka tamin’ny tany, nefa ny toerana nitrangan’izay manoloana ny IHS somary maizimaizina ihany.
Karazan’entna maro no namidy tao amin’ity toerana ity: ny finday, lamaody, kojakojan-tokantrany, sy ny maro hafa.
Hain-trano niniana natao ve sa nateraky ny inona ity niseho tao Analakely ity? Tsy fantatra aloha ny valiny hatreto. Mifamahofaho be ihany mantsy ny filazàna azo avy amin’ireo tra-pahavoazana sy nanana toeram-pivarotana tao, tao ny nilaza fa efa nisy tamin’ireo mpivarotra no nitaonaentana andro vitsy talohan’ity fahamaizana ity. Ary nisy mihitsy ny nahavita niteny fa ireo Sinoa mpivarotra ao amin’io toerana io no ahiahiana amin’ity hain-trano ity. Misy ary ve izany ny ady mangatsiaka eo amin’ny samy mpivarotra, sa inoa no tena marina?
Mandra-piandry an’izay anefa dia ndeha ianareo mpamaky entina an-tsary ho eny an-toerana
Tsy nifankahitana ny setroka indraindray
Mafy ihany ny asan'itony mpiady amin'ny setroka sy afo itony an!
Isan'ireo nanam-bintana nahavita nanavotra ampahan'entana ry zalahy ireto
Mivarotra aina maka itony kely tsy lanin'ny afo itony any anaty setroka any, no sady misedra ny fafy rano avy amin'ny mpamonjy hain-trano
ny mamoaka aloha no tanjona, dia mametraka izany eny amoron-dàlana, avy eo mitady izay hevitra manaraka
Mianika lavarangan'olona mba hahafahana mitifitra rano avy eny
Ity angamba no toeram-pivarotana tsy dia nahita faisana loatra miohatra amin'ireo hafa namany. Afaka namoaka izay tao anatiny, no sady tsy tratry ny afo koa
Efa nilelaka ny rindrin'ity trano mirehitra jiro ity koa ny afobe. Toa azo sary an-tsaina ny hafanana niaina tao anatiny tao sy ny mety ho fahasimban'izay zavatra nanakaiky na nihantona tamin'ny rindrina. Ity sary ity dia azo minitra vitsy talohan'ny nanapahan'ny JIRAMA ny herinaratra teo amin'ny faritra
Ety afovoan'ny arabe, miandry izay hitaterana ny tapa-porohana
Ho an'ity tompona magazay iray ity izao, mba ampahafirin'ny entana tao am-pivarotana re ireto avotra ireto e?
Rehefa avy novakiana ny varavarana avy aty amin'ny ambany rihana
Efa masaky ny afo talohan'ny nisokafan'ny trano ny entana
Aleo jerena ihany sao mbola misy ny azo raisina
ankoatry ny setroka toy izao, dia misy koa ny fipoahana mateitetika avy ao anatiny ao
Hitombo indray ny very asa, hampitombo laharana ny chomeurs. Krizy miampy krizy ity. Tana mihinan’ny taaaadin-kiraro mihitsy.
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: Analakely, TIA COM, TIA SHOP, Tsaralalana |
« Mianatra mi-blaogy fa tsy miblagy Sakan-dàlana: very ny 3 milliards FMG, karama Congres de la »